Ukumamela kuThula - I-Airbnb
Le ndlu encinci ikwenza uzive uxolo olunokuthula lwendalo, ngaphandle kokuba kude nesixeko, ulwandle kunye nekhasino. Isitiya esincinci semifuno sikunika iziqhamo kunye nemifuno yamaxesha onyaka onokuyisebenzisa simahla xa ulungisa izitya zakho. Indlu ixhotyiswe ngebarbecue kwaye kukho ivenkile enkulu yemizuzu emi-5 yokuhamba. Igumbi lokuhlala lizaliswe kukukhanya kunye nesandi seentaka. Nangona incinci, igumbi lokuhlambela lihle kakhulu kwaye limnandi. Inokubonelela ngebhedi yomntwana.
Indlu, ehlala kwindawo ye-aqueduct yekhulu leminyaka, isondele kwindawo yehlathi, enokuphononongwa ngokukhwela ibhayisekile. Inokubonelela ngeebhayisikile ezimbini. Indlu inendawo yangaphandle yemoto.
4.74 · Izimvo eziyi-78
Indlu, ehlala kwindawo ye-aqueduct yekhulu leminyaka ubudala, isondele kwindawo yehlathi, enokuphononongwa ngokukhwela ibhayisekile. Singabonelela ngeebhayisekile ezimbini.
Ndiyafumaneka ukuze ndamkele kwaye ndincede iindwendwe ngayo nantoni na eziyifunayo, kuquka ukufikelela kwisikhululo seenqwelomoya, nto leyo ethetha intlawulo eyongezelelweyo. Yonke into iya kwenziwa ukwenza ukuhlala kwakho kugqibelele.